Maalqabeenkii muddo kooban ku khasaaray 2 bilyan oo doolar - BBC News Somali
9 Maarso 2020
Xigashada Sawirka, Miguel Soltero
Andrew Rickman maanta wuxuu maamulaa shirkadda Rockley Photonics, oo gacan ka geysata soo saarista adeegyada casriga ah ee ay u baahan yihiin jiilka dambe
Mar qura waxaa soo ifbaxay shirkadaha bixiya adeegga internet-ka ee loo yaqanano "dotcom", taasoo sababtay inay burburaan dhammaan shirkadihii waaweynaa ee suuqa heystay.
"Waxay ahayd sidii khasaaraha hubka nuclear-ka," ayuu yiri isagoo dib u xasuusanaya.
Ciyaartooy noqday ganacsade weyn shil ku dhacay awgiis
Haweeney lacag gaaraysa 20 milyan oo doollar isticmaashay intii uu ninkeeda xabsiga ku jiray
Xigashada Sawirka, Andrew Rickman
Andrew wuxuu sheegay in hantidii uu horay u heysan jiray laga sheegi jiray wargeysyada UK
Wuxuu saadaaliyay in shirkaddiisa ugu dambeysay ee Rockley Photonics ay sanadkiiba iibin karto adeegyo ku kacaya balaayiin gini
"Si gaar ah ugama aanan fikireynin waxa ay warbaahinta iga sheegayeen," ayuu yiri Andrew, oo hadda 59 jir ah. "Lacagtu ma ahayn muhiimadda, sababtoo ah waxay ku qorneyd kaliya wargeysyada. Inaan noqdo bilyaneerkii ugu horreeyay ee dotcom waxay ila ahayd riyo".
Markii lasoo gaaray sanadkii 2013-kii wuxuu billaabay shirkaddiisii ugu dambeysay - Rockley Photonics.
Sheekh Umal oo ka hadlay sida looga hortaggi karo afduubka gabdhaha
Dumarka Suudaan oo is caddayntii is cayilin ku daray
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 8 Agoosto 2017